Mitondra fiovana ao amin'ny vaovao tsy tapaka ny lalao Blackjack no Hi Lo Blackjack. Io add-eo amin'ny endri-javatra mamela anao miloka amin'ny lanjan'ny faharoa karatra ho nanao ny mpivarotra. Mety na miloka izany mba ho ny lanjany ambony kokoa na ambany vidin'ny karatra voalohany. Na dia tsy hisy fiantraikany ny tena lalao, dia manampy amin'ny ny winnings ary manana fiantraikany lehibe eo amin'ny lalao ny RTP koa.
Momba ny Developer ny Hi Lo Blackjack
Novokarin'ny NYX-Azo, Hi Lo Blackjack dia vokatry ny fiaraha-miasa ny roa-dalam-pandrosoana ireo orinasa lalao. Ny Duo dia nivory tamin'ny volana Febroary 2015 ary efa manome ny tsara indrindra Casino finday lalao nanomboka tamin'izay.
Hi Lo Blackjack no mahazatra lalao Blackjack amin'ny nandray tsara ny heviny. Tsy misy na inona na inona sarotra momba izany ampiana-on. Ny Hi Lo Bet endri-javatra fotsiny manampy mahafinaritra ny lalao. Ny mahazatra enina miravaka ny karatra sy ny filokana, ny lalao mandeha amin'ny tahaka ny ho fantatrareo. Fanteno ny poti-arakaraky ny lanjan'ny Bet tianao ny hametraka, ary koa ny filokana no maniry ny hilalao. Raha vao vita, namely ny fifanarahana bokotra hanombohana ny lalao.
Hi Indro dia iray amin'ireo filokana no milalao mandritra ny Blackjack. Eto, ny mpilalao mahazo ny fahafahana miloka ny lanjan'ny ny karatra faharoa izay ho voasariky ny mpivarotra taorian'ny karatra voalohany no napetraka eo ambony latabatra. ankehitriny, ny mpilalao tsy maintsy hifidy na ambony na ambany, izay, ianao no mieritreritra hoe raha ny karatra faharoa dia ny ambony na ny ambany sanda noho ny karatra voalohany. Raha angamba tsara, dia hahazo karama ho azy avy hatrany. Ny hafa tranga nahazo dia rehefa tanteraka ny 21 dia tratra ao amin'ny karatra faharoa mihitsy. A manosika mitranga raha toa ny karatra voalohany i Ace, ary ny faharoa koa dia toa ho Ace. Ny mpilalao ho very ny miloka raha ny karatra faharoa dia Ace raha ny voalohany dia tsy, na raha toa ny Vina dia diso.
Raha vao ny Hi Lo Bet dia ny, ny tapaka lalao Blackjack nitohy. Fahazoana tanteraka ny 21 na akaiky kokoa dia ny tanjona ny lalao.
Miaraka amin'ny RTP ny 99.92%, Hi Lo Blackjack dia mahavariana tsy tapaka dikan-tenin'ny Blackjack. Raha mitady ny sasany fanampiny mahafinaritra ao amin'ny toerana tena Casino lalao, dia izao no lalao tsara ny vola amin'ny.